अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र पोर्न स्टार स्टार्मी डेनियल्सको पूरा राम कहानी
HOME » अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र पोर्न स्टार स्टार्मी डेनियल्सको पूरा राम कहानी
बीबीसी। अमेरिकी पोर्नस्टार स्टार्मी डेनियल्स आफूसँग गरिएको एक कथित अनुबन्धलाई लिएर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएकी छन्। पोर्नस्टार स्टार्मी डेनियल्सले २००६ को सुरुवातमा उनको ट्रम्पसँग अफेयर्स भएको दाबी गर्दै आएकी छन्। यद्यपी सो दाबीलाई ट्रम्पले अस्विकार गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिले सो दाबीलाई अस्विकार गरेपछि यो कहानी किम महत्वपूर्ण छ?
को हुन् पोर्नस्टार स्टार्मी डेनियल्स?
स्टेफनी डेनियल्सको बाल्यकालको नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड थियो र उनी १९९७ मा लुइसियामा जन्मिएकी हुन्। उनी पोर्न फिल्मको दुनियामा अभिनेत्रीका रुपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। २००४ मा उनले निर्देशन र लेखकको रुपमा आफ्नो काम सुरु गरेकी थिइन्।
मोट्ली क्रू म्युजिकल ग्रुममा वाद्ययन्त्र बनाउने निक्की सिक्सकी छोरी स्टार्म र अमेरिकी मदिरा कम्पनी ज्याक डेनियल्सको नाम मिलाएर उनले आफ्नो नाम स्टार्मी डेनियल्स राखेकी हुन्।
उनले ४० इयर ओल्ड भर्जिन र नाक्ड अप जस्ता फिल्म र मरुन फाइवको म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छन्।
२०१० मा उनले लुइसियानाबाट सिनेट पदकालागि चुनाव लडेकी थिइन्। तर, आफ्नो उम्मेद्वारीलाई गम्भीरतापूर्वक नदिएर उनले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएकी थिइन्।
पोर्नस्टार स्टार्मी डेनियल्सको आरोप
उनले के दाबी गरेकी छन् भने २००६ मा क्यालिफोर्निया र नेवादाबीचमा अवस्थित लेक टोहोय होटलमा उनको भेट ट्रम्पसँग भएको थियो। त्यो बेला ट्रम्प एक व्यापारी थिए।
२०११ मा डेनियल्सले ड्रनटच पत्रिकालाई अन्तर्वाता दिएकी थिइन्। (त्यो अन्तर्वाता यही वर्ष जनवरीमा प्रकाशित भएको थियो) जसमा उनले आफूलाई ट्रम्पले डिनरकालागि अफर गरेको र आफू होटलको कोठामा ट्रम्पसँग भेट गरिसकेको बताइएकी थिइन्।
डेनियस्लसले होटलमा ट्रम्पसँग अन्तरंग सम्बन्ध कायम भएको दाबी गरेकी छन्। यद्यपी सो दाबीलाई ट्रम्पले अस्विकार गरेका छन्।
यदि डेनियल्स आरोप सत्य हुन भने मेलानियाले ट्रम्पका छोरा ब्यारनलाई जन्म दिएको चार महिनापछि हो।
ट्रम्पले देखाएका थिए लालच
डेनियस्सका अनुसार ट्रम्पले उनलाई आफ्नो टेलिभिजन शो ‘ द एपरेन्टिस’ मा अवसर दिनसक्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिको चुनाकालागि चुनावी दौडमा सहभागी हुनु पहिला ट्रम्प टेलिभिजन शो एपरेन्टिस’ संचालन गर्थे। ‘मैले ट्रम्पसँग बसेर सार्कमा आधारिक एक डकुमेन्ट्री पनि हेरेँ,’ उनले भनिन्।
स्टार्मी डेनियल्सको दाबी अनुसार ट्रम्प र उनीबीच त्यसपछि पनि कयौं पटक वातचित जारी रह्यो। उनका अनुसार २०१० मा सिनेट पदकालागि आफ्नो उम्मेद्वारी दिने क्रममा ट्रम्पसँग उनको अन्तिम कुराकानी भएको थियो। २०१६ मा भएको राष्ट्रपति चुनाव भन्दा पहिला दुवैबीच अफेयर्स चलेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
गत केही महिनादेखि स्टार्मी डेनियल्सको नाम एक पटक फेरि चर्चामा छ। जनवरीमा वाल स्ट्रीट जर्ननमा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो। जसमा राष्ट्रपतिका निजी वकिल माइकल कोहेनले अक्टुबर २०१६ मा राष्ट्रपति चुनाव पहिला स्टार्मी डेनियल्ससँग एक लाख ३० हजार डलरको सम्झौता भएको दाबी गरिएको थियो।
जर्नलका अनुसार सम्झौता अनुसार स्टेफनी क्लिफोर्ड, डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्धलाई सार्वजनिक स्थानमा भन्न नपाइने भन्ने थियो।
यो विषयमा ह्वाइट हाउसले भनेको थियो, ‘यो पुरानो दस्तावेज हो, जसमाथि फेरि चर्चा सुरु भएको छ। र चुनाव भन्दा पहिला नै यसको खण्डन गरिसकिएको छ।’
कोहेनले पैसा दिएको कुरालाई अस्विकार गरेका थिए। वाल स्ट्रीट जर्नललाई दिएको एक अन्तर्वातामा उनले भनेका थिए, ‘ट्रम्पमाथि लगाइएका आरोप निराधार हुन्। सबै पक्षले लगातार वर्षौैसम्म यसको खण्डन गरेका छन्।’ तर यही वर्ष फेब्रुअरीमा उनले स्टार्मी डेनियल्सलाई पैसा दिएको स्वीकार गरेका थिए।
न्युर्योक टाइम्सलाई दिएको एक अन्तर्वातामा माइकल कोहेनले भनेका थिए, ‘यो सम्झौताका बारेमा ट्रम्पको अभियान र ट्रम्पको कम्पनीलाई केही पनि जानकारी छैन। स्टार्मी डेनियल्सलाई उनले पैसा आफ्नो गोजीबाट दिएका थिए।’ कोहेनले भने, ‘क्लिफोर्डलाई गरिएको भुक्तान पूरै वैध हो र यो कुनै पनि प्रकारको क्याम्पेन फंडिङको हिस्सा होइन।’
मंगलबार स्टार्मी डेनियल्सले ट्रम्प विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने भएकी छन्। उनले ट्रम्प र आफूबीच भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरेकी छन्। उनका वकिल माइकल अवेनातीले यो मुद्दाका बारेमा प्राप्त दस्तावेजको जानकारी ट्विट गरेका छन्। यसको अघिल्लो दिन राष्ट्रपति ट्रम्पले फेब्रुअरीमा स्टार्मी डेनियल्स विरुद्ध अदालतबाट रोक लगाउने सम्बन्धी आदेश प्राप्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
ह्वाइट हाउसका अधिकारीकालागि यो विवाद महत्वपूर्ण समयमा बाहिर आएको छ र विवाद अन्त्य हुने जस्तो देखिएको पनि छैन। पहिला नै राष्ट्रपति चुनावमा रुसको कथित हस्तक्षेपका बारेमा जाँच चलिरहेको छ र ट्रम्पका कयौं अधिकारीले उनको साथ छोडिसकेका छन्।
ह्वाइट हासउ यो बेला फेरि विवादमा पर्न चाँहदैन। तर यो विवादकासाथ पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटनसँग जोडिएको विवाद सम्झन लायक छ। ह्वाइट हाउसमा काम गर्ने मोनिका लेविंस्कीसँग अफेयर्स सम्बन्धलाई लिएर झुठ बोलेको अभियोगमा बिल क्लिन्टलाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको थियो।